ဆောင်းပါးများ - အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ်
အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ် > ဆောင်းပါးများ
အဆိုပါ3အကောင်းဆုံးအစားအသောက်နှင့်စားနပ်ရိက္ခာစည်းကမ်းများသည်သင်၏ Mediumship နှင့်အကြားအမြင်ရစွမ်းရည်တိုးတက်ဖို့
Megan မတ်လ 11, 2017aComment ချန်ထား အဆိုပါ3အကောင်းဆုံးအစားအသောက်နှင့်စားနပ်ရိက္ခာစည်းကမ်းများပေါ်တွင်သင်၏ Mediumship နှင့်အကြားအမြင်ရစွမ်းရည်တိုးတက်ဖို့
သငျသညျဝိညာဉ်တော်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အထူးအစားအစာပေါ်မှာရှိစရာမလိုပါဘူး။ သင်တစ်ဦးကြီးမားသောအရီဇိုးနား Iced Tea တစ်အစားအသောက်ကိုကာကိုလာပြီးနောက်ဝိညာဉ်တော်နှင့်ချိတ်ဆက်ကာ [ ... ] နိုင်ပါတယ်
သင့်ရဲ့အကြားအမြင်ရစှမျးဆောငျနိုငျ Block နိုင်သလားဒါက5အရာ
Megan မတ်လ 11, 2017aComment ချန်ထား သင့်ရဲ့အကြားအမြင်ရစှမျးဆောငျနိုငျ Block နိုင်သလားဒါက5အရာပေါ်
ကအဘိဥာဏ်အစွမ်းအဖွံ့ဖြိုးဆဲမှကြွလာသည့်အခါလူအများစုသူတို့အဘိဥာဏ်အစွမ်းအမြှင့်တင်ရန်အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်အာရုံစိုက်နေကြသည်။ သို့သော်များစွာသောတကယ်တော့အတွက် [ ... ] နှေးကွေးဖြစ်ကြောင်းအမှုအရာလုပ်နေကြ
COFFEE: THE ကမ္ဘာပေါ်တွင်စွဲတတ်တဲ့မူးယစ်ဆေးဝါး
Megan မတ်လ 11, 2017aComment ချန်ထား ကမ်ဘာပျေါတှငျဆုံးစွဲတတ်တဲ့မူးယစ်ဆေးဝါး: COFFEE အပေါ်
မေးခွန်း: "ဒီနေ့ COFFEE ဘဲငါပထမဆုံးနေ့ BE ရည်မှန်းခဲ့သည် - ငါအိုင်တီ 9AM စေ။ ငါအိုင်တီသောက်စဉ်ထိုအခါ, ငါ [ ... ] ဤစကားများအားသင့်ကော်လံဖတ်ရန်
အရက် - အနာပျောက်စေဂမ္ဘီရပညာရှင်လမ်းညွှန်
Megan မတ်လ 11, 2017aComment ချန်ထား အနာပျောက်စေဂမ္ဘီရပညာရှင်လမ်းညွှန် - အရက်အပေါ်
ငါသိလူအတော်များများဖြစ်, သို့မဟုတ်ဘဝကတဆင့်ရရအရက်အပေါ်မှီခိုနေကြပါပြီ။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, ငါ [ ... ] passive လက်ခံမှုနှင့်နောက်ကျောမှအရက်သမားလုံးလုံးလြားလြားမကျေနပ်မှုကနေကိုင်ပြီးင့်
Megan မတ်လ 11, 2017aComment ချန်ထား4လက္ခဏာတွေပေါ်သင်ကအကြားအမြင်ရစေခြင်းငှါ
#1 Sign: ဝိုင်နှစ်ယောက်မျက်မှန်ကိုသင်ပို Insight အစဉ်အဆက်ကိုသူတို့လျှော့ပေါ့ခြင်းနှင့်တက်ကြွစွာသူတို့၏စိတ်ထဲတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတဲ့အခါပြဿနာဖြေရှင်းနည်း "ကိုမြင်လျှင်" ရုတ်တရက်လူများ၏စကားကိုနားထောငျလုပ်ရမလား? [ ... ]
Megan မတ်လ 11, 2017aComment ချန်ထား မအရက်သေစာအကူအညီနဲ့ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အဘိဥာဏ်စွမ်းရည်ကိုဆီးတား?
အဘိဥာဏ်စွမ်းရည်ကို [ ... ] မသိမသာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကျနော်တို့မဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့ယုတ္တိနှင့်အတူရိပ်မိသောအရာကိုထက်စဉ်မှာတက်ကောက်နေနေကြသည်ကိုသတိပြုမိဖြစ်ကြှနျုပျတို့အပျေါခေါ်ဆို
အကြားအမြင်အရက်နှင့်စွဲလမ်းမှုမှ Vulnerable Are
Megan မတ်လ 11, 2017 1 မှတ်ချက် အကြားအမြင်အပေါ်အရက်နှင့်စွဲလမ်းမှုမှ Vulnerable Are
ကောင်းပြီ, ငါ့ကိုဒီလူကြိုက်များခေါင်းစဉ်ဖြစ်မစေခြင်းငှါပြောကိုပထမဦးဆုံးဖြစ်ကြကုန်အံ့။ သငျသညျခေါင်းစဉ်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြ၏ကိုဖတ်ပါကနားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သို့သျောလညျး [ ... ] ရဲ့ကိုကြည့်ကြကုန်အံ့
ကို Safe ဝိညာဉ်အလုပ် 8 စည်းကမ်းများ
Megan မတ်လ 11, 2017aComment ချန်ထား ကို Safe ဝိညာဉ်အလုပ် 8 စည်းကမ်းများအပေါ်
အဘိဥာဏ်သို့မဟုတ်ဝိညာဉ်ရေးရာအလုပ်သင့်ရဲ့ ... ကုလားထိုင်ပေါ်မှာထိုင်လျက်, အချို့လေ့ကျင့်ခန်းလေ့ကျင့်တွေအကြောင်းပဲမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မဆိုလို, ဤအမှုအရာတွေအကြောင်း, ဒါပေမဲ့သူကပဲထိုင်လျက်ထက်ပိုမိုလိုအပ်သည်။ [ ... ]
သတိပေးချက်နှင့် Precognition အကြားခြားနားချက်
Megan မတ်လ 6, 2017aComment ချန်ထား သတိပေးချက်နှင့် Precognition အကြားကွာခြားချက်အပေါ်
သတိပေးချက်နှင့် Precognition အကြားအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောခြားနားချက်ရှိ၏ သဘာဝအလားတူသော်လည်းအဲဒီနှစျခုစွမ်းရည်များထဲမှကွာခြားချက်ရှိသည်။ ဒီအနည်းငယ်ပိုကောင်းနားလည်စေရန်, [ ... ] ငါ့ကိုပထမ start ပါစေ
Megan မတ်လ 6, 2017aComment ချန်ထား စစ်မှန်သောနှင့်လိမ်လည်မှုအကြားအမြင်အကြားကွာခြားချက်များအပေါ်
ဒါဟာ [ ... ] တဦးတည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးခန့်သာ, အဘိဥာဏ်သို့မဟုတ်အလတ်စားစာဖတ်သူများသူတို့ကိုယ်သူတို့မခေါ်သောလူလေးယောက်ထဲကယနေ့များ၏အဘိဥာဏ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကြောင်းတွေ့ရှတစ်တုန်လှုပ်ဖွယ်အချက်ဖြစ်ပါသည်
တစ်ဦးအကြားအမြင်ရကို Select လုပ်ပါဖို့ကိုဘယ်လို
Megan မတ်လ 6, 2017aComment ချန်ထား တစ်ဦးအကြားအမြင်ရကို Select လုပ်ပါဖို့ဘယ်လိုပေါ်
ဘယ်လိုတယောက်ကောင်းတစ်အဘိဥာဏ်ကိုရှာဖွေသနည်း? နံပါတ်တစ်နေရာလွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ နှုတ်မဆိုကောင်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှာဖွေတာနဲ့တူ [ ... ] ဖြစ်ကောင်း ferreting ရဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်
ဓာတ်ပုံပြပွဲမှတ်ဉာဏ်, Synesthesia နှင့်အဝေးမှကြည့်
Megan မတ်လ 6, 2017aComment ချန်ထား ဓာတ်ပုံအသင်းမှတ်ဉာဏ်, Synesthesia and Remote အမြင်အပေါ်
Iwas မကြာသေးမီက "ဓာတ်ပုံပြပွဲမှတ်ဉာဏ်" ရှိခဲ့သူတစ်ဦးယောက်ျား၏အင်တာဗျူးကိုနားထောင်။ အဘယ်သို့ငါသူသည်ဤဆုကြေးဇူးကို / စွမ်းရည်အကြောင်းကိုပေးခြင်းခံခဲ့ရသည်အသေးစိတ်အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့တွေ့ရှိခဲ့ပါက [ ... ] ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
နံနက်ကျနော်အကြားအမြင်ရသို့မဟုတ် Schizophrenia မှစ. ဆင်းရဲဒုက္ခ?
Megan မတ်လ 6, 2017aComment ချန်ထား ငါအကြားအမြင်ရပေါ်တွင်သို့မဟုတ် Schizophrenia မှစ. ဆင်းရဲဒုက္ခ?
ကျနော်တို့ကိုသူတို့အဘိဥာဏ် / အလတ်စားသို့မဟုတ် schizophrenic လျှင်အံ့သြလူစုထဲကမြောက်မြားစွာတင်ပြရကွပွီ။ ဒါက [ ... ] schizophrenia များ၏တဦးတည်းလက္ခဏာသင်တန်းပေးသောနှစ်ဦးစလုံးအကြားအမြင်အသံတွေကိုနားကြားနေသည်စဉ်းစားနားလည်
စာမျက်နှာ 1 စာမျက်နှာ2စာမျက်နှာ 3